Ciyaarta Kama Dambeysta ee Koobka Gobolada Soomaaliya oo maanta Dhacaysa • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Ciyaarta Kama Dambeysta ee Koobka Gobolada Soomaaliya oo maanta Dhacaysa
Ciyaarta Kama Dambeysta ee Koobka Gobolada Soomaaliya oo maanta Dhacaysa
Ciyaarta kama dambeysta ee koobka gobolada Soomaaliya ayaa ka dhacaysa galabta garoonka Mire Awaare ee magaalada Garoowe caasimada Puntland.
Ciyaarta Final-ka ayaa dhexmari doonta xulalka kubadda cagta ee gobolada Banaadir iyo Bari oo wareegaas usoo baxay,waxaana ay tahay ciyaar aad u adag oo xiiso badan.
Magaalada Garoowe waxaa 24-saacadood lasoo dhaafay soo buux dhaafiyey oo soo gaarey dad fara badan oo ka kala yimid magaalooyinka ugu waaweyn ee Puntland,waxaana ay doonayeen in ay daawadaan ciyaarta kama dambeysta.
Dadka ugu badan ayaa waxaa ay ka yimaadeen magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari,waxaana intooda badan ay soo galeen habeenimadi xalay kuwaas oo u yimid in ay daawadaan xulkooda oo galabta ciyaaraya.
Ciyaarta ayaa bilaabman doonta galabnimadii saacadu markii ay ku beegantahay 03:00-PM galabnimo ee saacada Geeska Afrika,waxaana kasoo qaybgali doona masuuliyin sare oo ka tirsan Dawladda Puntland iyo Dawladda Federaalka iyadoo la qaban doono xaflad lagu soo xiraayo koobka.
Waxaa adag in la saadaliyo xulka ku guuleysan kara koobka,waxaana labadaan gobol ay yihin kuwa wareegyadi hore kusoo reebeen ama kaga soo adkaadeen xulal adag oo loo saadalinaayay in ay qaadaan koobka.
Xulka gobolka Banaadir ayaa wareegi afarta kooxood rigooreyaal kaga adkaadeen xulka martigelinaysay ciyaaryahaan ee Nugaal,iyadoo gobolka Bari ay ku durduriyeen xulka gobolka Jubadda Hoose oo 9-jeer qaaday koobkaan lagana cabsi qabay in koobkaan ay mar kale qaado ayna ahayd koox adag.
Tartanka 18-aad ee koobka gobolada Soomaaliya oo ay sanadkaan martigelisay Puntland ayaa soconaayay mudo 15-maalmood.
Amaal Yuusuf Macalin
Tagged With: Ciyaaraha gobolada